Na-enye ihe ntinye ego, na-adọgbu onwe ya kpoo, 400W Metal Halide Led Retrofit si China emeputa
Nkọwa:Ngwongwo Ntughachi Led,Ihe mgbochi na-adọghachị adọka,Ngwongwo nke ígwè nke 400W,,,
Home > Ngwaahịa > Ihe nnweta ozuzu ọkụ
Ngwaahịa nke Ihe nnweta ozuzu ọkụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ngwongwo Ntughachi Led , Ihe mgbochi na-adọghachị adọka suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ngwongwo nke ígwè nke 400W R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ihe nlekota nke 80W maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ  Kpọtụrụ ugbu a
100W Na-echekwa ụgbọala Lotbox Light Retrofit Kit  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ngbachapu DLC maka ihe ndozi maka HID Fixtures 240W  Kpọtụrụ ugbu a
120W Led Dimmable Retrofit Kit Shoebox Light Retrofit  Kpọtụrụ ugbu a
150W Na-eburu mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Lot Lot  Kpọtụrụ ugbu a
60W Ngwongwo Ngwongwo nke Led for Metal Malide 175W  Kpọtụrụ ugbu a
Akụkụ Uhie Kpọrọ Iche nke 80W maka Ndagharị Ụkwụ  Kpọtụrụ ugbu a
100W DLC Led Kit Rọpu maka Wall Packs  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe nkesa nke 120W na-ekpuchi ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
150W Ahịa Kpịakọta nke Ahịa maka Bollards  Kpọtụrụ ugbu a
Akara ngwongwo DWB 300W maka Street Lighting  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụahịa otu: USD 69 / Piece/Pieces
Ihe nnweta kpochapu ọkụ nke 80W anyị kwadoro ngwa gị na ngwa ngwa nke kachasị mma. Ụlọ ọrụ a na- erekwa ụgbọala nke a na-adọba ụgbọala na Led a nwere ihe dị mgbagwoju anya nke 120LM / W na onye na-edozi ike na nchekwa nke ọma maka 250-watt metal...
Anyị arụmọrụ dị elu Na-adọba ụgbọala ọkụ Led Retrofit 100w nwere ike ịtinye ngwa ngwa n'ime ihe ọ bụla. Ụlọ ọrụ a na- adọkpụ akpụkpọ ụkwụ dị mma maka ngwugwu mgbidi, ebe a na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ n'okporo ámá ma ọ bụ ụlọ ọrụ gas. Ihe nkesa...
Ọnụahịa otu: USD 103 - 105 / Piece/Pieces
Bbier 240W Akpa Ngwongwo Azụ maka HID Ngwa bụ obere ike oriri na mfe iji wụnye. Ndị a na-eji ihe mpempe akwụkwọ a na- echekwa ihe karịrị 80% na ọkụ eletrik ma e jiri ya tụnyere mgbanaka dị elu nke sodium na ọla ọkụ. A na-eji kits anyị DLC Led...
Ọnụahịa otu: 69USD
Ihe ngwangwa anyị dị 120 Watt Led Dimmable Retrofit Kit ruru 15600 Lumens na nke 120W Led Retrofit Kit nwere ike dochie 300w-400 watt MH / HPS / HID / omenala ọkụ ọkụ. Ihe dị ka 120 Watt Led Retrofit Kit nwere agba agba 5000K na-eme ka ìhè doo anya,...
Ọnụahịa otu: USD 67 - 69 / Piece/Pieces
Nke a 150W Led Retrofit Light Kit na- enye 19500 lumens na 150 watts na ịrịba Lumen arụmọrụ nke 130 lm / W. Ụlọ ahịa anyị na- adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala Lot 150w bụ iji dochie 400W-600W MH / HPS / HID omenala ndị na-edozi ọkụ. 150 Watt Led...
Ọnụahịa otu: USD 56 - 57 / Piece/Pieces
Bbier 60w Akpa Ngwongwo Ngwá Ọrụ maka Ọkpụkpụ Mmiri na-enye ìhè 7800 nke ìhè na-enwu gbaa (5000K) na CRI dị elu karịa 85 na 120 degrees okporo ụzọ ikuku na-enye ebe sara mbara. Ihe akụrụngwa a enwere ike itinye ya ngwa ngwa n'ime ihe ọ bụla ọ...
Ọnụahịa otu: USD 65 - 66 / Piece/Pieces
Bbier 80W Akụrụngwa Ngwá Ahịa maka Fluorescent Ndozi na -ewuru-na Diana Ezigbo ọkwọ ụgbọala na IC hụ nkwụsi ike nke ìhè, ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'okpuru AC100-277V na mba na mpaghara dị iche iche. Akara Igwe Mmiri a na-enwu enyo maka...
MGBE ECHICHE NA NTỤKWỤKWỤKWỌ - Mgbe ngwaahịa anyị na-arụ ọrụ maka ngwugwu ngwugwu na- arụ ọrụ, ìhè ọkụ nke ọkụ nwere 100W (300W metal metal halide bulb replacement), nke pụtara ịchekwa ruo 90% gị na mmanụ eletrik dị ike karịa ọlaọcha ochie . Onye ọ...
Ọnụahịa otu: USD 67 - 68 / Piece/Pieces
AKWỤKWU NDỊ KWURU - Bbier 120W Akpa Ngwongwo Azụ maka Ogwe Uhie kwadoro ngwa gị na ngwa ngwa nke kachasị mma. Nke a na- erechasị kits High Bay nwere ihe kachasị emetụ n'ahụ nke 120LM / W na iji mgbapụta na-arụ ọrụ ike ma na-arụ ọrụ maka mgbanaka...
Bbier DLC kwadoro ngwa ngwa 150w nke kpochapụrụ ọkụ dị ka ihe dị ka 19,500 Lumens na kuki a na- akwụ ụgwọ maka Bollards 150w nwere ike dochie anya mita 400 MH / HPS / HID / omenala. 5000K agba aja na-eme ka ìhè doo anya. Ụlọ ọrụ ntanetị nke E39 nke...
Ọnụahịa otu: USD 159 - 161 / Piece/Pieces
[Nnukwu ihe] - Ihe ntanye nke anyị 300w maka Street Lighting na- enye 39000 lumens na ihe siri ike Lumen Efficacy nke 130 lm / W iji dochie 1000W MH / HPS / HID mmezi ọdịnala nke ọma, na-azọpụta 90% nke ego na ego gị , 5500K ìhè na-acha ọcha na-achi...
China Ihe nnweta ozuzu ọkụ Ngwa
Anyị 100W, 150W, 320W ikanam Retrofit Kit bụ maily dochie gị ẹdude ọkụ na a ọhụrụ na mma ọkụ technology, Dugara Retrofit Kit bụ DLC na ETL Listed.Temperature nchedo, Ọkacha dịkwuo ume arụmọrụ na àgwà nke ìhè na ihe owuwu .Ndị a bụ ezigbo ngbanwe maka ngwa ngwa ọkụ ọkụ .Pasented E39 (Mogul Base) Screw-in LED Retrofit for customers. Ogologo azu 400W a na-enye ihe dị egwu nke na-arụ ọrụ nke 130 lm / W iji dochie 175w na 1000W MH / HPS / HID ndị na-eme ka ìhè dị mma, na-azọpụta 90% nke ego na ego ego gị, na-eme ka ahụmahụ ọkụ ọkụ.
Ngwongwo Ntughachi Led Ihe mgbochi na-adọghachị adọka Ngwongwo nke ígwè nke 400W